မန်စီးတီး တို့ ဂိုးပြတ်နိုင်ပြီး ၊ အေတီကို မက်ဒရစ် တို့ တိုက်စစ်ရှာပုံတော်ထွက်နေတဲ့ . . . . . မနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
မန်စီးတီး တို့ ဂိုးပြတ်နိုင်ပြီး ၊ အေတီကို မက်ဒရစ် တို့ တိုက်စစ်ရှာပုံတော်ထွက်နေတဲ့ . . . . . မနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
မန်ချက် စတာ စီးတီး ဟာ ယမန်နေ့ ညက ကစား ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် မှာတော့ ဘန်လေ အသင်း ကို အဝေးကွင်း ၄ – ၁ ဖြင့် အနိုင် ကစား ပြီး နိုင်ပွဲ ပြန်လည် ရရှိ ခဲ့ ပါတယ် ။ စီးတီး အတွက် တိုက်စစ်မှုး ဂျေဆူး က ၂ ဂိုး သွင်းယူ ခဲ့ပြီး ရိုဒရီ ဖာနန်ဒက် နဲ့ မာရက် တို့ က တစ်ဂိုးစီ သွင်းယူ ပေးခဲ့ ကြပါတယ် ။ ပဲလေ့စ် နဲ့ ဘုန်းမောက် တို့ရဲ့ ပွဲမှာ တော့ အိမ်ရှင် ပဲလေ့စ် က ၁ – ၀ ဖြင့် အနိုင် ရရှိ ခဲ့ ပါတယ် ။
၀ါရင့် တိုက်စစ်မှုးကြီး ဇလာတန် အီဘရာဟီမိုဗစ်ချ် ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်တွေ ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု ကို ငြင်းပယ် ပြီး အေစီမီလန် အသင်း ထံ ရာသီဝက် စာချုပ် နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ ဖို့ နီးစပ် နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အီတလီ သတင်း ဌာန တွေ က ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
နာပိုလီ အသင်း ကတော့ အေစီ နည်းပြ ဟောင်း ဂတ်တူဆို နဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး နေပြီး လက်ရှိ နည်းပြ အန်ဆယ်လော့တီ ကို မကြာခင် မှာ ထုတ်ပယ် ဖို့ စီစဉ် နေတယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အသက်လက်တီကို မက်ဒရစ် ဟာ အထောင် တိုက်စစ်မှုး သစ် ကို ရှာဖွေ နေပြီး PSG တိုက်စစ်မှုးကြီး ကာဗာနီ ၊ အေစီမီလန် တိုက်စစ်မှုး ပီယာတက် နဲ့ တိုရီနို တိုက်စစ်မှုး ဘယ်လော့တီ တို့ ကို စောင့်ကြည့် နေတယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး အသင်း ရဲ့ တောင်ပံ ကစား သမားလေး ဆွန်ဟောင်မင် ဟာ Asian International Player of the Year ဆု ကို တတိယ အကြိမ်မြောက် ဆွတ်ခူး သွားခဲ့ တယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ရီးရဲ တောင်ပံ ကစား သမား ဘေးလ် ဟာ ယခု အပတ် အတွင်း ပြန်လည် စတင် ခဲ့တဲ့ ကလပ် အသင်း ရဲ့ ပထမဆုံး လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ် ကို လွဲချော် ခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
စပါး ကွင်းလယ်လူ အဲရစ်ဆင် ဟာ အသင်း နဲ့ စာချုပ်သစ် ထပ်မံ ချုပ်ဆို တော့မှာ မဟုတ်ဘဲ အသင်း ပြောင်းရွှေ့ ဖို့ ကိုသာ ဆုံးဖြတ် ထားပြီး ဖြစ်တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။ အဲရစ်ဆင် အနေနဲ့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ကို မပြောင်းရွှေ့ ခဲ့ရ ပါက မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဆီက ကမ်းလှမ်းမှု ကို စောင့်ဆိုင်း မယ်လို့ လည်း သတင်းထွက် နေခဲ့ ပါတယ် ။
အင်တာ နည်းပြ ကွန်တီ ဟာ ယူဗင်တပ် မှာ ကိုင်တွယ် ဖူးခဲ့တဲ့ ဗီဒယ် ကို ပြန်လည် ခေါ်ယူ လိုပြီး ဘာစီလိုနာ နဲ့ ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ် သွားမယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
PSG တိုက်စစ်မှုး လေး ဘာပေ ကတော့ သူ့ရဲ့ စာချုပ်သစ် ကိစ္စ ကို ရာသီ အကုန် အထိ စောင့်ဆိုင်း သွား ဦးမယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ်မှုးလေး တမ််မီ အေဘရာဟမ် ကတော့ ယနေ့ ည ကစားမယ့် အက်စတွန် ဗီလာ နဲ့ ပွဲကို လွဲချော် နိုင်တယ် လို့ နည်းပြ လမ်းပတ် က ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ရီးရဲ မက်ဒရစ် အသင်း ဟာ နာပိုလီ ခံစစ်မှုး ကိုလီဘာလေ ကို လာမယ့် နွေရာသီ မှာ ခေါ်ယူ ဖို့ စိတ်ကူး နေပြီး ရာမိုစ့် ရဲ့ နေရာ အတွက် အစားထိုး အဖြစ် မျှော်လင့် ထားတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
အသင်း နည်းပြ ဆာရီ နဲ့ အဆင် မပြေ ဘူးလို့ သတင်း တွေ ထွက်နေ ပေမယ့် ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ဟာ လာမယ့် ရာသီ အထိ အသင်း နဲ့ အတူ ဆက်ရှိ နေပါဦး မယ်လို့ ယူဗင်တပ် အသင်း အကြီးအကဲ တစ်ဦး က ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူ ပေါ့ဘာ ဟာ လည်း ယနေ့ ည ကစားမယ့် စပါး နဲ့ ပွဲ ကို လွဲချော် မှာ ဖြစ်ပြီး လာမယ့် အပတ် မှာ ကစားမယ့် မန်ချက် စတာ ဒါဘီ အတွက် လည်း မသေချာ သေးဘူး လို့ သိရ ပါတယ် ။
စပါး ဘက် မှာတော့ ဘန်ဒေဗီး ၊ လာမယ်လာ ၊ မစ်ချယ် ဗွန်း တို့ ဒဏ်ရာ ရနေ ကြပြီး ဂိုး သမားကြီး လိုရစ် ကတော့ ၂၀၂၀ အစော ပိုင်း မှာ ပြန်လည် လေ့ကျင့် နိုင်မယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။